Ma dhab baa in Soomaaliya ay ka laabatay Dacwadda Badda ee taal ICJ ? – Idil News
Ma dhab baa in Soomaaliya ay ka laabatay Dacwadda Badda ee taal ICJ ?
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa beeniyay in dowlada Soomaaliya ay ka laabatay dacwadii badda eea Maxkamadda ICJ.
Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ahaa mas’uulkii hoggaaminaya ergada Soomaaliya ee maxkamadda ICJ, ayaa sheegay in kiiskaas ay maxkamadda go’aan ka gaari doonto.
“Muranka Badda waxaa dhameystiri doona ICJ kadib markii dhageysigii hadalka ahaa lasoo geba gebeeyeey March 15-18 ee sanadkan. Waxaan sugeynaa go’aan caddaalad ah. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dalna waa arrin gaar ah,” ayuu yiri Mahdi oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka.
Dowlada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday Khamiistii inay dib u soo ceshatay xiriirkii kala dhexeeyay dowlada Kenya kadib markii magaalada Muqdisho uu wadahadal kula yeeshay madaxda dowlada Soomaaliya ergey ka socday dowlada Qatar.